ZTE wuxuu soo bandhigi doonaa taleefanka gacanta ee ugu horeeya kamarad shaashadda ka hooseysa | Androidsis
Daabacaadda xigta ee IFA Berlin, oo ka bilaabmi doonta usbuuca ugu horeeya bisha Sebtember iyo caasimada Jarmalka, waxay noqon doontaa mid aad dhif u ah. Dhinac marka laga eego, tiro badan oo soosaarayaal ah ayaa ka dhacay wicitaanka, iyaga oo aan doonaynin inay khatar geliyaan aafada adduunka ee inagu soo food leh.
Dhinaca kale, waxaan leenahay soosaarayaal sida ZTE kuwaasoo ku dhawaaqay joogitaankooda. Oo iska jir, shirkadda fadhigeedu yahay Shenzhen waxay higsaneysaa heer sare IFA 2020: waxay soo bandhigi doontaa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh kamarad hore oo shaashadda ka hooseysa. Waxaan ka hadleynaa qalab la soo bandhigi doono Sebtember 1.
Mar labaad, ZTE waxay dhaaftaa tartamayaasheeda
Ma aha markii ugu horreysay ee ZTE ay tahay shirkaddii ugu horreysay ee soo bandhigta nooc cusub. Horeba waqtiga waxay nagu la yaabeen ZTE AXON M, taleefankii ugu horreeyay ee isku laaban suuqa. In kasta oo ay run tahay in ay dhacday iyada oo aan xanuun iyo sharaf midna lagu haynin suuqa, badanaa sababta oo ah ma ahayn aalad isku laaban laakiin waa mobiil leh laba shaashad oo ay ku kala go'een mitir, haddana cidina kama qaadi karto mudnaanta ka horeynta kuwa la tartamaya.
Iminkana, ZTE waxay dib ugu laaban doontaa jidadkeedii hore iyadoo la soo bandhigo taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh kamarad shaashadda ka hooseysa. Tan, waxaa suurtagal ah in laga fogaado astaamaha caanka ah ee aan ku aragnay tiro badan oo terminal ah, ama kamaradda daloola ee ay isticmaalaan noocyada kale sida Samsung. Ma naqaano mid ka mid ah waxtarka uu taleefankan xasaasiga ahi yeelan doono, marka laga reebo cusboonaysiinta kamaraddiisa hore.
Qarsoodiga weyn ayaa ah sida ZTE uu ugu guuleystey xalinta dhibaatada weyn ee jirta markii lageeyo shidma shaashadda hoosteeda, maaddaama qaabkani uu sababayo in sawirrada qaar la qalloocdo ama midabbo qaldan leh. Waa inaan sugnaa ilaa Sebtember 1 si aan u helno jawaabo dheeraad ah ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE wuxuu kululeeyaa IFA 2020: wuxuu soo bandhigi doonaa taleefan casri ah oo leh kamarad shaashadda ka hooseysa
Sida loola wadaago koodhkaaga Instagram QR dadka aad taqaan
Baaskiilku waa ciyaarta ugu badan ee loo yaqaan 'Rocket League-like multiplayer arcade on Android'